सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीले खाए झापड, मुखमा गम्भीर चोट लाग्यो ! (भिडियो सहित) - Enepalese.com
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीले खाए झापड, मुखमा गम्भीर चोट लाग्यो ! (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७२ पुष २ गते १९:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २ पुस । देशकै सर्वाेच्च पद तथा गरिमा हो प्रधानमन्त्री । जसलाई सबैले सम्मान गर्छन् ।
तर, यहाँ एक व्यक्तिले थप्पड हानेर प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेका छन् । घटना युरोपेली राष्ट्र स्पेनको हो । जहाँ बुधबार प्रधानमन्त्री मारियानो राजोएको मुखमा स्पेनको पोन्टेवेड्रा शहरमा एक युवकले कसिलो मुक्का प्रहार थिए । युवकको मुक्काले प्रधानमन्त्रीको मुखमा गम्भीर चोट लागेको समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् । यसैगरी उनको चश्माको शीशा समेत टुटेको छ ।
एक प्रचार अभियानका क्रममा जनतासँग भेटघाट गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मारियानोमाथि आक्रमण भएको हो । एक जना नागरिकसँग कुराकानी गरिरहेका बेला दायाँ साइडमा उभिएका युवकले उनको मुखमा थप्पड हानेर भाग्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यहाँ खटिएका प्रहरी र उपस्थित जनताले समातेका थिए ।
स्पेनका सञ्चारमाध्यमका अनुसार मारियामाथि एक १७ वर्षीय युवकले उनको बायाँ गालामा थप्पड हानेका थिए । यो झापडले उनको चश्माको शीशा टूट्यो र उनलाई गम्भीर चोट पनि लाग्यो । घटनालगत्तै युवकलाई गिरफ्तार गरियो ।
प्रधानमन्त्री मारियानाले घटनापछि आफू ठिक भएको बताए तर, वाया तर्फको गालामा रातो निशान रहेको छ । समाचार अनुसार सेल्फी लिने बहानामा ति युवकले प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)